Home » Lahatsoratra farany farany » Vaovao Mafana » Vaovao farany momba ny UK » Lafo loatra ny dia any UK
Airlines • Airport • Vaovao Mafana Eoropeana • Vaovao Mafana • Vaovao momba ny fitsangatsanganana • Fitsangatsanganana an-trano • Car Rental • Hospitality Industry • Hotels & Resorts • Vaovao • Fitsangatsanganana an-dalamby • fanorenana • Resorts • tompon'andraikitra • Theme Parks • Tourism • Fitaterana • Fanavaozana ny tanjon'ny dia • Travel Wire News • malaza ankehitriny • Vaovao farany momba ny UK • Vaovao isan-karazany
Ny fizahan-tany any an-toerana UK dia nanonitra ny vidiny avy teny an-tsena
Ny mpamatsy fialan-tsasatra any UK ary ny mpamatsy fampiantranoana dia nampisondrotra ny vidiny hatramin'ny taona 2021 tao anatin'ny fangatahana «staycation».
Ny fiakaran'ny vidin'ny fizahan-tany any UK dia nahitana ireo mpivahiny britanika nirohotra nankany amin'ireo mpandraharaha ivelany tamin'ny 2022
Ny fiakaran'ny vidin'ny fizahantany eto an-toerana dia mety hanakana ny mpizahatany anglisy amin'ny 2022.
36% ny mponina any Angletera dia 'tena' na 'somary' miahiahy momba ny toe-bolany.
Mpamatsy fialantsasatra UK maro no mila mieritreritra ny paikadiny momba ny vidiny izao.
Ny sasany UK ny mpamatsy fialantsasatra sy fialan-tsasatra eto an-toerana dia nampisondrotra ny vidiny hatramin'ny taona 2021 tao anatin'ny fiakarana avo fangatahana 'staycation' ary izany dia mety hanakana ny mpizahatany anglisy amin'ny 2022.
Ny fiakaran'ny vidim-piainana ateraky ny fotoana very ho an'ny orinasam-pizahan-tany maro any UK izay nanana fotoana voalohany hampisondrotra ny fifaninanana amin'ireo mpandraharaha fizahan-tany ivelany. Raha tokony ho izy, ny vidin-javatra be loatra dia mety hamidy azy ireo amin'ny tsena amin'ny fahavaratra 2022 sy ho avy, raha toa ka mitady hirona any ivelany indray ny mpandeha UK.
Araka ny Q1 2021 UK fanadihadiana nataon'ny mpanjifa, 26% amin'ireo mpamaly no nanapaka ny vokatra sasany tamin'ny teti-bolany noho ny areti-mandringana. Ankoatr'izay, tao anatin'io fanadihadiana io ihany, ny 36% n'ireo mpamaly UK dia nilaza fa 'tena' na 'somary' niahiahy momba ny toe-bolany izy ireo, manasongadina ny filan'ny indostrian'ny fizahan-tany ny vokatra lafo vidy.
Na dia fanamaivanana ho an'ny indostrian'ny fizahan-tany any UK aza ny fahitana ny firoboroboan'ny fizahan-tany eto an-tany amin'ity fahavaratra ity, mahakivy ny mahita ireo orinasa mifantoka amin'ny valisoa maharitra fa tsy mijery ny fitoniana maharitra eo amin'ny indostrian'ny fizahan-tany any UK. Ny orinasa dia nanana fotoana lehibe namoronana traikefa nahafinaritra tamin'ny fialantsasatra anglisy ary nanisy lanjany tamin'izany. Mampalahelo fa mety ho very izany fahafaha-manao izany ho an'ireo mpamatsy fijanonana be loatra noho ny fihetsika fitrandrahana tafahoatra amin'ny fangatahan'ny mpandeha.
Mpizahatany ao an-toerana maro no mety nampitaha ny vidiny amin'ny fampidirana rehetra Fialantsasatra fonosana eropeana, izay mazàna dia misy sidina, toeram-ponenana, famindrana, sakafo ary zava-pisotro, ary hita fa ireo fialantsasatra ireo dia matetika no mora kokoa amin'ny daty mitovy amin'ny fialantsasatra an-trano. Ambonin'izany, ny lalàna dia atao mangarahara kokoa, ny fanafoanana ary ny famerenam-bola dia natao rariny kokoa, ary mpanjifa maro no vita vaksiny feno. Vokatr'izany, mihidy ny varavarankely amin'ny fahafahan'ny fizahan-tany any an-toerana hanao fiheverana maharitra maharitra, ary maro amin'ireo mpamatsy fialantsasatra any UK no mila mieritreritra ny paikadim-bidiny ankehitriny.
Miaraka amin'ny ampahany amin'i Eropa misokatra ho an'ny mpizahatany indray dia mampitaha ny vidiny mihoatra ny taloha ny mpandeha. Amin'ny farany, ny orinasa mihoa-pefy loatra dia mety hamidy ny tenany amin'ny tsenan'ny dia, izay manimba tena ary tsy ho velona amin'ny fotoana maharitra. Ny orinasam-pialan-tsasatra eto an-toerana dia mila mahatakatra ny toetoetran'ny mpifaninana ivelany sy ny fifaninanana masiaka noforonin'izy ireo. Jet2holidays sy TUI no mitarika amin'ny fanomezana fialan-tsasatra fonosana satria mifehy tanteraka ny rojom-panolorany izy ireo, mandefa tahiry ho an'ny mpandeha amin'ny endrika vidin'ny fifaninanana.
Rehefa dinihina, ny fomba fiasa mahery setra ataon'ny mpamatsy fialantsasatra any UK amin'ny vola amin'ny fangatahana dia toa mpandraharaha mpizaha tany tsy lavitra sy fohy ary ivelany dia toa hahazo ny mpanjifa taloha haingana kokoa noho ny andrasana vokatr'izany.